कोरोना संक्रमणले देश थिलथिलो भएका बेला त सांसदहरुलाई दशै भत्ता आफैमा न्यायोचित थिएन । रोजगारी तथा मजदूरी गुमाएका जनता दुई छाक जोड्न धौं धौं परेर सडकमा पुगेका बेला सांसदको बैंक खातामा भने तलब बराबरको दशैं खर्च । कर तिर्ने जनता सडकमा तर तिनै भोका नाङ्गा जनताको करबाट जनताका प्रतिनिधि भनिएका सांसदलाई दशै खर्च ? सुन्दा पनि तितो लाग्ने यथार्थ । सरकार आफैं यो वर्ष पूरानो कपडा लगाएर आफ्नै घरमा बसेर दशैं बनाउन भन्ने तर राज्यकोषले तलब खुवाइरहेको सांसदलाई भने दशै मान्न अतिरिक्त खर्च ?
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता धमलाले भने– ‘हामीले निमयसंगत ढंगले मासिक रुपमा माननीय ज्यूहरुले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउने हो । यो दशै भत्ताबारे गत वर्ष सरकारले २०७६ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी निर्णय गरेको थियो ।
शम्भु दंगाल/रातोपाटीबाट साभार